बीपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति : अदालतको राय मागिने- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
बीपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति : अदालतको राय मागिने
सुनसरी — उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिमा कानुनी जटिलता रहेकाले अदालतसँग राय माग्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार । तस्बिर : प्रदीप/कान्तिपुर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीपछि प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियार निलम्बनमा परेका छन् । बीपी कोइरालाको १०५ औं जन्मजयन्ती तथा बीपी प्रतिष्ठानको २६ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गरेपछि मन्त्री यादवले भने, ‘आर्थिक अनियमितताको कारण एउटा उपकुलपति निलम्बनमा छन् । तर, बर्खास्त नभएको अवस्थामा नयाँ उपकुलपति नियुक्ति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर अदालतसँग राय माग्ने छौं । रौनियारको मुद्दाको फैसला हुन अदालतमा पाँच सात वर्षसम्म लागे के गर्ने ? प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न उपकुलपति त चाहियो ।’
उनले हाल प्रतिष्ठानमा बिग्रेका महंगा मेडिकल उपकरण मर्मत सम्भार तत्काल बनाउने बताए । ती उपकरणहरू बन्न नसके नयाँ खरिद गरिने पनि बताए । प्रतिष्ठानमा मुटु रोगको उपचार गर्ने ८ करोड रुपैयाँको कार्डियाक क्याथल्याव, ३ करोड २४ लाख रुपैयाँको अक्सिजन प्लान्ट, डेन्टलको सेफालो ग्राम एक्सरे बिग्रेका छन् । त्यस्तै ८५ प्रतिशत डेन्टल चियर, सिटी स्क्यान पनि बिग्रेर कामै नलाग्ने भएका छन् । प्रतिष्ठानमा जडान गरिएको जिरो पोइन्ट ३५ टेस्लाको एमआरआईले मेरुदन्डको एमआरआई गर्न सक्दैन ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमामा लागू गरेपछि जटिल रोग भएका पूर्वी जिल्लाका अधिकांश बिरामीहरू प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आउने गरेका छन् । तर प्रतिष्ठानको आफ्नै फार्मेसीमा औषधि नभएकाले बिरामीले पैसा तिरेर बाहिरको मेडिकल हलबाट औषधि किन्न बाध्य भएका छन् । यसबारेमा उनले प्रतिष्ठानलाई फार्मेसी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिए ।
अन्य जिल्ला अस्पतालहरूमा प्रसूति हुन आउने गर्भवतीहरूको निःशुल्क सुत्केरी गराउने र हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउनुका साथै कुरुवालाई समेत सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको भए पनि प्रतिष्ठानमा भने प्राकृतिक रूपमा बच्चा जन्माए कम्तीमा १२ हजार र शल्यक्रिया गर्नु परे २० हजार रुपैयाँसम्म उल्टै तिर्नुपर्छ । उक्त विषयमा उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबीच केमा समन्वय नमिलेको हो निमित्त उपकुलपतिसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए ।
यसअघि प्रतिष्ठानको २६ औं वार्षिकोत्सवमा प्रतिष्ठानमा विगतमा देखिएको समस्या भविष्यमा नदेखिने गरी सरकारले चाँडो समाधान गर्न चाहेको बताएका थिए । उनले प्रतिष्ठान सञ्चालनमा जटिल समस्या देखा परेकाले सबै मिलेर समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले प्रतिष्ठानलाई छुट्टै मेडिकल युनिभर्सिटी बनाउने तयारी भइरहेको पनि बताए ।
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:१६
सरिफाले बढ्यो आम्दानी
धनकुटा — सरिफा फल बेचेर धनकुटा नगरपालिका ८ तेत्रेदाङका कृषकले आम्दानी बढाएका छन् । जंगलमा पाइने सरिफाको माग उल्लेख्य भएपछि स्थानीय कृषकले बारीमा बिरुवा रोपेर व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेका छन् । सरिफा अर्गानिक फल भएकाले माग बढी हुने गरेको स्थानीयको दाबी छ ।
जंगलबाट बिरुवा ल्याएर ६ रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक उत्पादन थालेका स्थानीय जिद्धबहादुर आठपहरियाले सरिफा बेचेरै एक महिनामा ३० हजार रुपैयाँ कमाई गरेको बताए ।
‘विगत वर्षमा भन्दा भाउ पाएकाले आम्दानी बढेको छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि बोटमा टिप्न प्रशस्तै बाँकी रहेकाले आम्दानी बढ्न सक्ने आशा छ ।’ जिद्धबहादुर जस्तै आफ्नै बारीमा उम्रिएको सरिफा बेचेर पनि स्थानीयले मनग्य कमाइ गरेका छन् ।
खासगरी बेंसी क्षेत्रका जंगलमा भदौदेखि दुई महिनाको अवधिमा सरिफा फल्ने गर्छ । जंगलमा फलेका सरिफा टिपेर बजारमा बिक्री गर्नेको तँछाडमछाड चल्ने गर्छ । तर, पछिल्लो समय कतिपय कृषकले बारीमा रोपेरै पनि व्यावसायिक रूप दिन थालेको स्थानीय देवकुमारी आठपहरियाले बताइन् ।
उनले ५० बोट सरिफाबाट ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी गरेको जानकारी दिइन् । केही वर्षदेखि सरिफाको माग अत्यधिक बढेको उनको भनाइ छ । मल, विषादि प्रयोग गर्नु नपर्ने सरिफाको बजारमा माग बढेपछि स्थानीयबासी हौसिएका छन् । ‘बारीमा आफैं उम्रिने सरिफाबाटै अहिले त कमाई पो हुन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘वर्षौंसम्म खास मिहिनेत नगरी नै फल्ने भएकाले सजिलै हुने गरेको छ ।’
जंगल आसपासको बस्ती भएकाले याक्ते, सान्ताङ, तेत्रेदाङ लगायतका स्थानीयबासीको बारीमा पनि सरिफा उम्रने गर्छ । केहीले भने जंगलबाट बिरुवा ल्याएर बारीमा रोप्न थालेका छन् ।
बजारमा सरिफाको मूल्य ६० देखि ८० रुपैयाँसम्म पर्छ । तर कृषकले बारीबाट केजीको ४० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको बताए । यति बेला धनकुटा बजारका फुटपाथमा सरिफाको बिक्री उल्लेख्य हुने गरेको छ । स्थानीय बजारमात्र नभएर धरान, इटहरी, विराटनगरलगायत स्थानमा पनि सरिफा पुग्ने गरेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:१५